ဝင်းနဲ့ဇော်တို့အတွက် ရင်ဘတ် အ ပြည့်နဲ့ခံစားသီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်း လေး ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ ဟန်ထူး ဈာန် – အနုပညာရပ်ဝန်း
လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်က လိပ်ကျွန်းလူစွဲချက်နဲ့ ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့ ကြောင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံသားလုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရမှာ အမှန်ပါပဲနော်။
ဒဏ် ပေးခံ ထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ကတော့ သေဒဏ်ကနေ ထောင်ဒဏ် တစ်သ က် တစ်ကျွန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းရရှိခဲ့တာကတော့ ကံတရားက မျက် နှာ သာ ပေးလာခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…
တေးသံရှင်ဟန်ထူးဈာန်ကတော့ ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်အပြီးမှာ သူတို့အတွက် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးသီဆိုခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ” #အမှန်တရားဘုရား သိပါတယ်…. မိန့်အစား/တစ်သက်တစ်ကျွန်းဖြစ်သွားပြီတဲ့…
??If u can feel it.U can like and share ?
Posted by Han Htoo Zen ဟန္ထူးစ်ာန္ on Thursday, March 30, 2017
အပြီးအပိုင်လွတ်ပါစေ ဗျာ….. အဲ့အချိန် သူတို့အမေတွေနဲ့မျက်ရည်တွေမြင်တော့…. သူတို့ နှစ်ယောက်ကိုယ်စား အရမ်းခံစားခဲ့ရလို့ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာ (၄) နှစ်ရှိခဲ့ပြီ” ဆိုတဲ့ စာသား လေးနဲ့အတူ ပြန်လည်မျှဝေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းစာသားတွေကို Ak က ရေးသားပေးထားပြီး ဒီသီချင်းလေးကတော့ ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ရဲ့ရင် ထဲ မှာ ခံစားနေရတဲ့အရာတွေကို သီချင်းလေးနဲ့ ပြန်လည်ပုံဖော်ထားသလို ပရိသတ်ကြီးကိုပါ ဝမ်းနည်းခံစားမိစေမှာပါ။ ဧန်ထူးဈာန်ရဲ့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့သီဆိုထားတဲ့
သီချင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးရင်း ဝင်းနဲ့ဇော်တို့နှစ်ယောက်လည်း လျှော့ရက်တွေနဲ့ အမြန်ဆုံးပြန် လည်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။